Sida loo Download Videos ka Video Site Taasi
> Resource > Download > Sida loo Download Video laga Video Site Taasi
Video Site Taasi curates videos waa in aad aragto maalin kasta, oo ay ku jiraan guriga videos, clips TV show iyo majaajilada. Videos waa kuwo mar kasta u gaaban balse aad u badan oo xiiso leh ka heli kartaa. Waxaa laga yaabaa inaad ku qaatay saacado this site Laakiin hadii aad rabto in aad kala soo bixi videos for offline loo maqli karo? Weli raadinaya in xal loo helo si loo caawiyo? Halkan waa fursad wanaagsan. The Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) kala soo bixi kartaa wax kasta oo video laga Video Site in aad ku dhuumaaleysananaan meel kasta oo daawado. Waxa kale oo ay u bedeli karaan videos ah si loo soo wareejiyo qalabka la qaadi karo. Ma doonaysaa in ay isku day ah oo hadda? Bal aan ka soo hubi hoos ku qoran.
Download First iyo rakibi barnaamijkan on your computer. Markaasaa waxaa u abuurtaan si ay u helaan diyaar. Waxaan doonaa qaadan version daaqadaha sida tusaale.
1 Raadi videos aad jeceshahay ka Video Site Taasi
Tag internetka ee Video Site Taasi, taas oo soo bandhigay videos waa in aad maanta aragteen ee ku qoran bogga ugu weyn. Waxaad hoos u rogto karto si aad u ogaato kuwa xiiso in aad ugu. Markaas riix videos ay ku ciyaaraan. Mid ka mid ah wax in la xasuusto waa inuu u ciyaaro videos ku saabsan mid ka mid ah daalacashada soo socda: IE, Firefox ama Chrome.
2 Download videos ka Video Site Taasi
Marka video la ciyaaro, waxaad tagi kartaa midig sare ee shaashadda video si aad u ogaato button Download ah. Riix badhanka si aad video ka soo bixi.
Hab kale oo lagu soo bixi video waa in aad nuqulka url video oo riix badhanka URL koollada. Waxaad ku dari kartaa videos badan intii suurto gal iyada oo mid ka mid ah laba siyaabood. Barnaamijkan kala soo bixi kartaa 5 videos by default iyo ilaa 10 videos dhismaha isku mar.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaari videos ku kombuyuutarrada gacanta aad, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo videos markii hore. Tag ay ku dhameysatay kaalinta maktabadda si aad u hesho videos iyo riix badalo button on xaq. Dooranaysaa qaab oo guji Ok si ay u bilaabaan soo celiyaa.
Fiiro gaar ah: Tag madax barnaamijka si loo ogaado Download markaas Beddelaan button oo guji. Dooranaysaa markii qaab oo soo socda waxaad kala soo bixi video ah, waxaa si toos ah isku badali doono.
Ma doonaysaa in ay isku day ah oo hadda? Just download it si loo soo dajiyo on your computer oo wuxuu ku raaxaysan videos ka Taasi Video Site waqti kasta iyo meel kasta.